नसोधौं देशले हामिलाई के दियो ? - Lumbini Times
फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा म फलानो जातको छोरा÷छोरी भएकोमागर्व गर्छु, म फलानो जिल्लाबासी भएकोमा गर्व गर्छु भन्दै स्टाटस् पोष्ट गर्ने धेरै भेटिन्छन् तर, त्यहि ब्यक्तिले म नेपाली भएकोमा गर्व गर्छु भन्ने स्टाटस् पोष्ट गरेको भने मुश्किलै भेटिन्छ । तर, यसको ठिक बिपरित यो देश यस्तै छ, यो देशको नेताहरु खराब छन् । कस्तो हो यो देश भनेर आक्रोश ब्यक्त गर्न ेतथा नकरात्मक कुराहरु पोष्ट गर्नेहरु प्रसस्तै भेटिन्छन् ।
यहि देशकै कुनै जिल्लाबासी हुनुमा गर्व गर्ने ब्यक्तिले म यो देशको नागरिक हुं भनेर गर्व गर्नको लागि अप्ठ्यारो किनरु यहि देशमा जन्मेको कुनै एउटा जाति भनेर गर्व गर्ने ब्यक्तिले म यो देशको नागरिक भएकोमा गर्व गर्छु भनि स्टाटस पोष्टगर्न किन हिच्किच्यांउछ रुआखिर समस्याकहांनिर छ ?
बिहानबिहान चिया पसलमा हुने गफमा पनि यस्तै कुराहरु भईरहन्छन् । छोराछोरी पढेको भए पनि जागिर पाएको छैनन् ठुला मानिसहरु अर्थात हाकिमले चिनेजानेको मानिसहरुले मात्रै जागिर पांउछन् अर्थात नातावाद, कृपावाद चल्छ नचिनेको मानिसहरुले जागिर पांउदैनन्आदी । सबैजना चियाको साथमा समस्याको थुप्रो बयान गरिराखेका हुन्छन् कि, शायद हामि समस्या नै समस्याको बिचमाबांचिरहेका छौं । पसलमा उपस्थित अन्य ब्यक्तिहरु गफाडी मानिसकै कुरामा सहि थाप्दैगफाडीहरुको गफमाहो माहो मिलांउदै गफाडीहरुलाई उत्प्रेरणा दिईहेका हुन्छन् ।
देशमा समस्या छयसमाकुनै शंकानै छैन । हाम्रो देशमा मात्र होईन, संसारको सबै देशमा समस्या छ । तर, बिदेशमा हुने नराम्रा वा नकरात्मक कुराहरु हामिलाई थाहा नपाउने तर, उनिहरुको सकरात्मक कुराहरु बढि थाहा पाउने हुनाले बिदेशलाई हामिले स्वर्ग देख्छौं भने आफ्नै देशलाई नर्क ठान्छौं ।बिश्वको शक्तिशाली देश अमेरीकामा पनि समस्या छ । त्यहां ४ प्रतिशतमानिसहरु अझै पनिगरिबीको रेखामुनी बस्छन् , उनिहरु भोकमारी र घरबार बिहिन छन् । त्यस्तै धनि र गरिब बिचको ठुलो खाडल अमेरीकाको अर्काे ठुलो समस्याहो । जापानमा बढ्दो जनघनत्वले गर्दा प्रदुषण समस्याउत्पन्न गराउंदा सरकारको टाउको दुखाई भएको छ ।
सन् १९६३ मा भारतको आसाममा एउटा गरिब परिवारमा जन्मेका जादभ पायङ्ग सन् १९७९ मा १६ बर्षको हुंदा बाटोमा गर्मिको कारणले धेरै सर्पहरु मरेको देखे । सर्पहरु गर्मिको कारणले मरेको देखेपछि उनले २० वटा बांसको रुपहरु रोपे । त्यसपछि उनले भारत सरकारको एउटा प्रोजेक्ट मार्फत ५ बर्ष बृक्षारोपन गर्ने कार्य गरे । प्रोजेक्ट सकिएपछि अन्य कामदारहरु आआफ्ना घर फर्केर अन्यकामहरु गर्न थाले भने पायङ्गले त्यसपछि पनि लगातार त्यहां बृक्षारोपन गरेर त्यहां ५०० हेक्टरको घना जंगलबनाईसकेका छन् जुन भारतको राष्ट्रिय निकुञ्जको ३४१ हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा ठुलो जंगलबनाईसकेका छन् जुन जंगल अहिले बाघ, भालु, हात्ती जस्ता जंगलीजनावरको राम्रो बासस्थलभएको छ ।
पायङ्गले पनि सरकारको वा अन्यकुनै ब्यत्तिले गर्ला कि भनेर कुरेर वा हेरेर मात्रै बसेको भए अहिले त्यहां घना जंगल हुने थिएन होला । समस्याको कुरा गरेर समय बिताउने भन्दा त्यो समस्या समाधानको के गर्न सकिन्छ भनेर पहलगर्न थालियो भने पक्कै त्यो समस्या समस्या रहंदैन । मैले मात्र गरेर के फरक पर्छ अर्थात मैले मात्रै गरेर कहां हुन्छ, यो मेरो काम होईन भन्नु एउटा सुयोग्य नागरीकले भन्न सुहांउदैन । आफूलाई सचेत र शिक्षित बर्ग ठान्ने ब्यक्तिले आफ्नो घर अगाडीको बाटोमा खाल्टो छ तर यो त सडक बिभागको कामहो भनेर तमासा हेर्नु पटक्कै शोभनिय कार्य होईन । एक जनाको पहलले पनि धेरै परिवर्तन आंउछ । संसारमा परिवर्तन ल्याउन महान ब्यक्तिहरु अब्राहमलिंकन, गान्धि, माओ, बिपिकोईराला, मदन भण्डारी सबै शुरुमा एक्लै थिए ।
भनिन्छ जहां समस्या, त्यहां उपाय । समस्याभएकै कारणले हामिले आफूलाई सिद्ध गर्ने मौका पांउछौ । यो हामिलाई परिपक्क बनाउने सुवर्ण अवसर पनि हो । समस्याको बिषयमा चिन्ता गरी गफ चुट्नु भन्दा समस्याको बारेमा चिन्तनगरी समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिएमा पक्कै केहि परिवर्तन सम्भव छ । हाम्रो देश खत्तमछैन । देशका कुनै अंगहरु बिग्रिएका मात्र हुन् । हाम्रो शरिरको कुनै भागले कामगर्न छाड्यो भने शरिरै खत्तमभयो भन्न मिल्दैन र बिग्रिएको भागलाई उपचार गराउनुपर्छ वाअपरेशन गरेर फाल्नुपर्छ । यदि प्यारालाईसिस नै भएको छ भने पनि फिजियोथेराजी गरेर सहि बनाउनुपर्छ ।
२०५८ साल भाद्र १६ गते रिलिजभएको नेपाली चलचित्र दर्पनछांयामा एउटा सन्देश छ ः नसोधौं देशले हामिलाई के दियो, सोधौ देशलाई हामिले के दियौ । देशलाई गाली गर्नु जन्मदिने आमालाई गालीगर्नु बराबर हो । यो देशको जिम्मेवारी होईन कि, हामिलाई सुख, शान्ति, प्रगति दिने । तर, हाम्रो जिम्मेवारी हो कि हाम्रो देशलाई राम्रो बनाउने, प्रगति दिलाउने, बिकास गराउने, हाम्रो देशलाई बिश्व सामु चिनाउन, बिश्वको अगाडी देशको शिर उच्च बनाउने यो देशको नागरीकको हैसियतले हाम्रो जिम्मेवारी हुन आंउछ । अझै भन्नुपर्दा देश बनाउने मेरो जिम्मेवारी हो भन्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो जात, गांउ, जिल्लामागर्व गरेझै नेपाली भएकोमा पनि गर्व गरौं । यो देश बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो । जिम्मेवारी मेरो हो । समस्या समाधानमा हाम्रो जिम्मेवारी छ । समस्या समाधानमा मेरो जिम्मेवारी छ ।
लेखकः बुद्धि मल्ल, ओम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।